यसैगरी बिताइदिन्छु दुई दिनको जिन्दगी - Worldnews.com
न्यायाधीशले घुस खाएमा के गर्ने होला ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगको सम्मेलनमा गएको बेला नेपालका एक प्रधानन्यायाधीशले सोधेछन्। प्रश्न सोध्ने बित्तिकै त्याहाँ उपस्थित न्यायाधीश गललल्ल हाँसेका थिए रे। हाँस्दै उनीहरुले भनेछन् ‘न्यायाधीशले पनि घुस खान्छन् र।’ ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यो कुरा सार्वजनिक ठाउँमै भनेका थिए।
कमल ढकाल तपाईंहरुले यसरी चुनाव जित्नुहुन्छ भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइन।’ राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई २०४८ र २०५१ सालमा एमालेले...
विद्यार्थीलाई खिया लगाउने हैन टल्काउने भन्ने सूत्र बोकेर हिँडेका छन् अनिल।‘टल्काउनुको अर्थ सकरात्मक परिवर्तन गराउनु हो। राम्रो रिजल्ट र असल व्यवहार बनाउन कसर बाँकी नराख्नु...
News of Nepal 2017-03-18
कमल ढकाल अफ्रिकन एक उखान छ। ‘बुद्धिमान मान्छेले कहिल्यै सबै कुरा जान्दैन, मूर्ख मात्र सधैं सबै जान्ने हुन्छ।’ यसलाई मद्दत गर्ने नेपालीमै घुलिसकेको एक अंग्रेजी भनाइ पनि छ।...
“ह्वेर वी मूभ ?” अर्थात् हामी कता जाँदै छौं ?
कमल ढकाल मलाई निराशा मन पर्दैन। निराश कुरा लेख्न मन पनि लाग्दैन। यसै पनि निराशाले घेरेको यो देशमा थोरै भए पनि देखिएका प्रगतिको कुरा गर्न मन लाग्छ। मलाई उज्यालो मन पर्छ।...
शरद श्रेष्ठ सरकारी सेवामा कार्यरत रहेर पनि साहित्यमा मन राखेर देखा परेका उपन्यासकार हरि कटुवालले पहिलोचोटि आफ्नो ‘अधुरो सपना’को सार्वजनिकीकरण एउटा समारोहकाबीच हालै मात्र...
News of Nepal (NewsDB Live) 2016-12-31
कमल ढकाल बैकुन्ठ एक्सप्रेस। यो बैकुन्ठ लैजाने ल्याउने गाडी वा रेलको नाम हैन। यो नाटक हो। यसले भन्छ– ‘सुख सुविधा आफ्नै भूमिमा हुन्छ। अन्य देशमा हुँदैन। अमेरिका बैकुन्ठजस्तै...
News of Nepal 2018-03-17
कमल ढकाल बैकुन्ठ एक्सप्रेस। यो बैकुन्ठ लैजाने ल्याउने गाडी वा रेलको नाम हैन। यो नाटक हो। यसले भन्छ– ‘सुख सुविधा आफ्नै भूमिमा हुन्छ। अन्य देशमा हुँदैन। अमेरिका बैकुन्ठजस्तै भूमि भनेर गए पनि वास्तविक सुख त्यहाँ हुँदैन। स्वदेशमै सुख हुन्छ। देशप्रेमका कारण पनि होला यो कृतिले विसं २०४२ सालमा मदन पुरस्कार पायो। जिन्दगीभर पढ्ने र पढाउने, लेख्ने र लेखाउने काम गरेका मोहनराज शर्मासँग...
इमानदारिता, नैतिकता लगनशीलता धैर्यता भए मान्छे खुुसी हुन्छ। खुुसी हुन स्वास्थ्य पनि चाहिन्छ। उमेर प्रदत्त केही रोग छैन उनमा। छिनमै रुन्छन्। छिनमै हाँस्छन्। आफ्नो संवेदना लुुकाउँदैनन्। सबै परिवार आ–आफ्नो ठाउँमा ठीक छन्। अरूलाई गरेको मद्दतले पनि उनलाई खुुसी बनाएको रहेछ। खुुसी हुने धेरै कुरा महेशसँग छन्। र त उनी ह्याप्पी म्यानमै पर्छन्। रामायणमा दुई पात्र कैकेयी र विभूषण गज्जब...
कमल ढकाल मान्छेले चाहेको चिज गर्न सक्छ। के चाहने भन्ने कुरा व्यक्तिअनुसार फरक पर्छ। चरा देखेर उड्न मन लाग्यो मान्छेले तुरुन्त हवाइजहाज बनायो। माछाजस्तै पौडन मन लाग्यो सलल बग्न डुंगा बनाइहाल्यो। डाक्टर बन्न मन लागे डाक्टर। इन्जिनियर बन्न मन लागे इन्जिनियर। जे बन्न खोज्यो उही बन्न सक्ने। जे बनाउन खोज्यो उही बनाउन सक्ने। कस्तो अद्भूत प्राणी छ मान्छे। आम मान्छे भने यो कुरा...
केशव अधिकारी नेपाली साहित्यका अग्रज र वरिष्ठ साहित्यकार भीमनिधि तिवारीको जन्म वि.सं. १९६८ मा काठमाडौँको डिल्लीबजारमा भएको थियो। उनले नेपाली साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये पनि कविता, नाटक, कथा, गजल, प्रबन्ध, उपन्यास आदि विधामा कलम चलाएर बहुमुखी साहित्यकारमा दरिन पुगेका थिए। उनले आईएसम्मको शिक्षा मात्र हासिल गरेका भए पनि धेरै स्वाध्यायन गर्ने उनको बानीले गर्दा उनको ज्ञानको क्षितिज...
ह्युग मिल्ल शुरुवाती दिनमा ‘सेक्स गुरु’ भनिने भगवान श्री रजनीसको चेलाबनेका थिए । तर, प्रेम र दयामा आधारित समाजमा उनको सपना तासको पत्ता जस्तै बिग्रियो । अनलाइन प्लेटर्फम नेटफ्लिक्सले हालै ओशोमा आधारित ‘वाइल्ड वाइल्ड काउन्ट्री’ शीर्षकमा एक बृत्तचित्र शृखला बनाएको छ । उक्त शृंखलामा रजनीशको आश्रममा भारतदेखि अमेरिका स्थान्तरण भएको देखाइएको छ । अमेरिकाको ओरेगन प्रान्तमा ६४ हजार एकड...